Fefen’ny mpikatroka Makedoniana ao anaty fihetsiketseham-panoherana ny Governemanta · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 15 Septambra 2015 4:54 GMT
Saripikan'i Vanco Dzambaski, nahazoana alalana.
Novalian'ny sehatry ny olompirenena Makedoniana mpikatroka ao amin'ny Ajde-Hajde, tamin'ny alalan'ny fanokanana rindrina araka izay anaovany azy ny fanapahan-kevitry ny governemanta hanangana fefy vy manodidina ny lapan'ny governemanta ao Skopje, sy ireo rindrina hafa rehetra natsangana noho ny fanapahan-kevitry ny mpanapa-kevitra ao Makedonia.
Androany [12 septambra] tamin'ny alalan'ny fanokafana lehibe mahavariana, misy ahatsiarovana ilay asam-panapahana fehy mena amin'ny hety fahita mahazatra ho fanaon'ny praiminisitra Nikola Gruevski manerana ireo tanandehibe sy zanabohitra maro ao Makedonia, nisy vatam-baoritra goavana iray najoron'ny mpikatroka teo anoloan'ny [lapan'ny] governemanta, ahitana ny hafatra manao hoe “Fefenay ihany koa ianareo!”
Sary avy amin'i Vanco Dzambaski, nahazoana alalana.
Misy kilalaonteny ao anatin'ny tarehintsoratra, amin'ny fampiasana ny voambolana “fefenay” amin'ny heviny hoe “ampanalavirinay”. Ho fampahatsiahivana dia entin'ny mpikatroka ihany koa ireo hafatra maro manasongadina tsonga maro tamin'ny fihainoana miafina fandraisampeo tsy ara-dalàna naporitsaky ny mpitarika ny fanoherana tao anatin'ny volana vitsivitsy, izay nahazo anaram-bositra ao Makedonia hoe “baomba”. Tratra tao anatin'io fandraisampeo niporitsaka io ny maro tamin'ny tompon'andraikipanjakana ambony sy politisiana maro mihoa-pahefana, miresaka fanafenan-keloka bevava sy halabato, sy ny fanaovan-kolikoly ao anaty resaka an-telefaonina.
Misy sary hafa maro azo jerena ato.